Isoftware-Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 5)
Ngobuqhetseba obuncinci siza kuchaza into esifuna ukuyibona kwiifayile zethayile kwiWindows 8.1.
Ukuba uyayithanda i icon ye-ExE okanye iFayile yeDLL, ungayikhupha ngeempawu kwiFayile ekwiWindows.
Uyihambisa njani i-pixel yesikhombisi semouse nge-pixel kwiWindows
Isikhombisi semouse sinokuhanjiswa nge-pixel nge-pixel ngobuqili obuncinci kwiWindows okanye ngesicelo somntu wesithathu usebenzisa ikhibhodi.
Yonwabela i-Star Wars kwiwindows terminal yewindows
I-Star Wars kwikhowudi ye-ASCII inokonwabela kwi-terminal yolawulo ngaphakathi kwiWindows ukuba sisebenzisa inkonzo yeTelnet.
Uyifaka njani ividiyo yeYouTube kwiPowerPoint 2010
Ngamaqhinga amancinci sinethuba lokufaka ividiyo yeYouTube kwiTemplate yePowerPoint ka-2010.
Ungasitshintsha njani isisombululo sekhusi kwiWindows kunye neendlela ezimfutshane
Ngokusebenzisa isixhobo esincinci seWindows uya kuba nethuba lokutshintsha isisombululo sescreen ngokusebenzisa iindlela ezimfutshane zekhibhodi.
Ungayiseta njani kwaye usebenze kunye ne-OneNote Clipper
I-OneNote Clipper yinkonzo eya kusinceda ukuba sibhalise kwaye sigcine umxholo wewebhu ukuze siwuphonononge kamva kwiakhawunti yethu ye-Outlook.com.
Uyenza njani iminxeba ye-HD ngeSkype kwi-Intanethi
Sikubonisa amanyathelo ambalwa ngokulandelelana ukuze wenze i-Skype HD isebenze kwi-Intanethi usebenzisa iplagi yasimahla evela kuMicrosoft.
Uyisebenzisa kanjani i-EasyBCD ukwenza isifakeli seWindows yeWindows
I-EasyBCD sisixhobo esincinci esiza kusinceda ukuba senze i-pendrive ye-USB njengesifakeli seWindows ngaphandle kokuyifomatha.
Uyibeka njani i-watermark kumaxwebhu eLizwi
Ukuba usebenzisa iMicrosoft Word 2010 ukubheka phambili, ungadibanisa umfanekiso njenge-watermark kumaxwebhu akho ukunqanda ukukopa.
Ezonaapps zilungileyo zeChromecast
IChromecast yenye yezixhobo ezithandwayo zokudlala umxholo wemaltimidiya kwisixhobo sakho se-Android kwiscreen seTV
Lawula ngokukhawuleza iividiyo zayo nayiphi na ifomathi kwi-iPad yakho nakwiMac
Funda ukubukela naluphi na uhlobo lwevidiyo kwi-iPad yakho entsha kunye nendlela yokuzibukela ngendlela efanayo kwi-Mac yakho
Indlela yokuvimba ukusetyenziswa kwezicelo kwiWindows ngeNkqubo yeBlocker
Inkqubo yeBlocker sisixhobo esiya kusinceda sithintele ukwenziwa kwaso nasiphi na isicelo esifakwe kwiWindows.
Uyikhuphela kwaye uyifaka njani iOfisi ka-2013 ebhaliswe ngokusemthethweni
Ukuba sinesitshixo semveliso yeOfisi 2013, ke uneendlela ezine ezizezinye zokukhuphela isifaki kwiziko elisemthethweni.
Faka ukongezwa kwi-Safari ukukhuphela iividiyo ze-YouTube
Funda ukuba ungalufaka njani ulwandiso kwisikhangeli seSafari ukuze ukwazi ukukhuphela ngokuzenzekelayo iividiyo kwiYouTube
Ukwazi njani ukuba i-antivirus yethu isebenza kakuhle
Ndikhankanya inkohliso encinci yokwazi ukuba ngaba i-antivirus oyifakileyo kwiWindows isebenza kakuhle.
Uyithumela njani imiyalezo kunye neefayile ngePushbullet ukusuka kwiWindows ukuya kwizixhobo eziphathwayo
IPushbullet sisicelo esincinci esinokusinceda ukuba sithumele imiyalezo okanye iifayile kwiWindows nakwisiphi na isixhobo esiphathwayo.
Ungayiseta njani isidiliya kwikhompyuter yakho
Ngamaqhinga amancinci sinokumisela umdiliya ukuba usebenze kwikhompyuter yethu ngokulula.
Ukujonga njani ii-imeyile ezintsha ngaphandle kokungena kwi-Gmail
Isazisi se-Gmail yiplagi-ngaphakathi eya kusazisa xa i-imeyile entsha ifikile ngaphandle kokuya ngqo kwibhokisi engenayo.
Uhlela njani iividiyo simahla ngeYouTube
I-YouTube inika ithuba lokuhlela iividiyo ngokulula kwi-portal yayo ngotshintsho, iifoto, izicatshulwa, umculo nokunye okuninzi.
IVineClient yiplagi kaGoogle Chrome eya kusivumela ukuba sisebenze noMdiliya kwiTwitter kwikhompyuter eqhelekileyo.
Isicelo sokukwazi ukufaka naluphi na uhlobo lwefonti kwi-iOS ngaphandle kokuya ejele
Umsebenzi weScreen ukuvumela ukuba wabelane ngescreen sekhompyuter yakho kunye nomnye kwinethiwekhi yendawo efanayo
Umsebenzi weScreen yinkqubo enokusetyenziselwa ukwabelana ngekhusi lekhompyuter yakho nabanye abakwinethiwekhi efanayo yalapha.
Ungasayina ungene kwiXbox Live kwiXbox One
Nje ukuba iXbox One iqhagamshelwe, funda ukuba ungene njani kwiXbox Live
Ngaba uyazi ukuba zeziphi ezinye iindlela onokuzisebenzisa endaweni yeWinamp?
I-WinAmp iyekile ukubakho kwaye ke, kufanelekile ukuqala ukufumana ezinye iintlobo zezicelo zokuphulaphula umculo.
Abona baxhasi baphambili bokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza kwiWindows
Siza kukubonisa uthotho lweendlela ezininzi zokuthumela imiyalezo ngoko nangoko kubathengi beWindows.
Isebenza njani i-OneDrive emva kokutshintsha kwegama leSkyDrive?
I-OneDrive ligama elitsha leSkyDrive, enezinto ezimbalwa ezinokuphandwa ngokweMicrosoft.
Amaqhinga okucoca indawo yokugcina yeWindows kunye nembali
Indawo yokugcina kwiVenkile yeWindows inokuqulatha imbali yezinto esizithengileyo kunye nokunye, kufuneka ucime olu lwazi ngezizathu zabucala.
Uyenza njani iminxeba yevidiyo yabucala kunye engaziwayo neGruveo kwi-Intanethi
IGruveo sisicelo sewebhu esiya kusinceda senze iminxeba yabucala kunye nengaziwayo nenombolo engaqhelekanga kunye nenkohliso.
Ungaphawula njani ngemiyalezo yelizwi kuFacebook ngeGoogle Chrome
Iplagi kaGoogle Chrome inokusinceda ukuba sishiye ukurekhodwa kwelizwi njengamazwana kwizithuba ze-Facebook.
Ungawuthumela njani umxholo woxwebhu lokubhaliweyo kwimemori yeWindows
Isiqeshana ngumyalelo esinokuwusebenzisa ukukhupha umxholo wefayile yokubhaliweyo kwimemori yebhodi eqhotyoshwayo yeWindows.
IWindows 8.1 iya kubhala ngokuzenzekelayo ii-drive zekhompyuter zakho
IWindows 8.1 iphakamisa ukubethela iidrive hard drive ngokwendalo ukuba nje awuphucuki kwiWindows 8.
Iifayile ze-NFO kunye ne-DIZ, ziyintoni kwaye zingazifunda njani kwiWindows
Siza kukhankanya amaqhinga ambalwa ukuze sikwazi ukubona iifayile zeNFO kunye nohlobo lweDIZ kwiWindows.
Ngaba uyazi ukuba kwiWindows 8.1 sele ungashicilela kwi-3D?
IWindows 8.1 inezinto ezintsha kwaye phakathi kwazo, ezo zokusebenzisa i-3D Printa ngokwendalo ngesixhobo sayo sasimahla.
Cima ikhompyuter yakho yeWindows 8.1 usebenzisa isikrini
IWindows 8.1 inokucinywa ngobuqhetseba obuncinci usebenzisa le nkqubo yokuTshixa isikrini.
Ngaba uyazi ukuba yintoni ecetyiswayo yi-MIcrosoft nge-Ofisi yayo yezixhobo zefowuni?
Uhlalutyo oluncinci lwento iMicrosoft esinika yona kunye neofisi yayo yeemodeli ezahlukeneyo zezixhobo eziphathwayo.
Uvavanya njani amanqaku amatsha eKitKat Android 4.4 kwiWindows
I-KitKat Android 4.4 yinguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kaGoogle esinokuthi ngoku siyilandele kwiWindows PC yethu.
Uyifumana njani kwakhona ifowuni yakho elahlekileyo ye-Android
Izicelo ezibini ezinokusinceda ukuba sibuyele kwifowuni yethu elahlekileyo ye-Android ngamanyathelo alula kunye nomzamo omncinci.
Ungayeka njani ukukhuphela i-Recycle Bin kwiWindows
Iindlela ezimbini onokuzisebenzisa ukucima iifayile kwiWindows ngaphandle kokuNgabinanto yokuphinda usebenzise iRycle Bin.
Uyifumana njani i-RSS feeds yakho ngeJellyReader
I-JellyReader yinkonzo yewebhu onokuyisebenzisa ukulandela iindaba ze-RSS zasimahla kwaye uqhagamshele kuGoogle Drayivu okanye kwiDropBox.
Yiba neWindows XP, Windows 7 kunye neWindows 8 ngombulelo ongapheliyo kwiWinSetupFromUSB
I-WinSetupFromUSB iyakusinceda ukuba sibe nezifakeli zeenguqulelo ezi-3 zeWindows kwisakhelo se-USB.
WinShake, uncedo lokutsiba ukusuka kwiScreen sokuya kwiWindows 8 Desktop
I-WinShake isinceda ukuba sikhawuleze sibeke phantsi kwi-Start Screen kwi-Windows 8 Desktop.
Iantivirus, yeyiphi kuzo zonke esele ikho efanelekileyo?
Senze uhlalutyo oluncinci losetyenziso oluchanekileyo ekufuneka lubekhona ngee-antivirus ezahlukeneyo ezikhoyo kwintengiso yeWindows.
Iimpawu ezili-10 ezilungileyo onokuzixabisa kwiWindows 8.1
IWindows 8.1 inamaqhinga amaninzi kubasebenzisi bethebhulethi enale OS, ezili-10 zazo zezona zibaluleke kakhulu ngokweMicrosoft.
Imiba enomdla ekufuneka uyazi ngeWindows 8.1
IiWindows 8.1 zingenziwa ngokwezifiso ukwenza umsebenzi wethu kule nkqubo isebenze ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Uyihlalutya njani ikhompyuter yethu ngeWindows Defender Offline
I-Windows Defender Offline yinguqu ekhethekileyo eye yacetyiswa nguMicrosoft ukuze isebenze ngentonga ye-USB okanye i-CD-ROM okanye idiski yeDVD.
Indlela yokusetha iphasiwedi eqinileyo
Isikhokelo ukuze ujonge ukuba ngaba amagama okugqitha owasebenzisayo akhuselekile. Ukuba azikho, siya kukufundisa indlela yokusetha iphasiwedi enamandla.
Funda indlela yokusebenzisa isixhobo sohlobo ngendlela ecacileyo nelula
Umculo ubalulekile namhlanje yiyo loo nto ndiza kukubonisa ukuba zeziphi izicelo ezi-5 ezilungileyo zeemvumi ezihambelana ne-OS X Mavericks
Yazi ii-Tweetbits kwaye uzilungiselele
Ezona zixhobo zilungileyo zokufota zilungiselelwe i-iPhone ka-10 ngokweVinagre Asesino
Sinikezela ezona zicelo zilungileyo zokufota ze-iPhone ka-2013 ngokweVinagre Asesino
Utshintsha njani nayiphi na icon kwiWindows 8
Funda indlela onokutshintsha ngayo nayiphi na icon kwiWindows 8
Iiwebhusayithi ezi-5 ezilungileyo zokukhuphela iifonti
Namhlanje eVinagre Asesino sithetha ngeewebhusayithi zethu ezintlanu esizithandayo ukukhuphela iifonti zohlobo lweTypographic zokulungiselela umsebenzi wethu
Cima uvule i-iPhone ngeqhosha laMandla elaphukileyo
Funda indlela yokuvula nokucima i-iPhone yakho ngaphandle kweqhosha laMANDLA
Izicelo ezi-7 zokwenza iifom zewebhu
Ngaphambi kokuba ujike kuyilo lewebhu ukuze wakhe iifom zewebhu, sikubonisa iindlela ezi-7 ezilungileyo eziza kusivumela ukuba sizenze ngokulula ngaphandle kokuya nakubani na.
Ungaqhubeka njani ukufaka iMicrosoft Office kwiLinux
IMicrosoft Office ngoku inokufakwa kwiLinux ngenkxaso yezicelo ezithile.
Ungasiqhuba njani isicelo kwiWindows ngaphandle kokuyifaka
Ngokusebenzisa izixhobo ezibini ezinomdla, umsebenzisi unokuzisebenzisa ukuguqula usetyenziso olusebenzayo kwiiLaptops zeWindows.
I-themeefy ikuvumela ukuba wenze izifundo ezikwi-Intanethi kwaye unike imisebenzi
I-themeefy sisicelo sewebhu esiya kusivumela ukuba sibe ngootitshala okanye abafundi kwiiklasi ezithile ezibonakalayo.
Lungisa ukuphazamiseka kwiWindows 8 ngeendlela zayo eziphambili zokuqalisa
Izinketho zokuqalisa kwiWindows 8 zinokusinceda kakhulu xa kuziwa ekubuyiseleni inkqubo engaqali.
Kufuneka-ube neeapps ze-Android
Zininzi izinto ezibalulekileyo ze-Android, kodwa namhlanje sikushwankathela kwiindidi ezili-11 ezahlukeneyo ukuze ufumane nezinye ezintsha.
Sebenzisa izihlanganisi zoPhendlo lweDesktop yeWindows 7
Sikufundisa ukuba uzenze njani iiKhonkco eziKhangela kwiwebhusayithi yakho ukuze zisetyenziswe Windows 7 Umhloli weFayile.
Uyifaka njani i-Recycle Bin kwi-Windows 7 Taskbar
Inkqubo yenyathelo ngenyathelo yokuncamathelisa kwi-Recycle Bin kwi-Windows 7 Taskbar.
Uyenza njani into yokuba isikrini sisebenze kwiWindows 7 xa sisuka kwikhompyuter
Izikrini ezinokusetyenziselwa ukuvimba iiWindows 7 ngokuzenzekelayo xa singasebenzisi ikhompyuter.
Indlela yokuphucula ubumfihlo be-intanethi
Isikhangeli se-Intanethi sigcina ulwazi olubalulekileyo olunokuthi lulandelelwe ukuba asilwenzi ngendlela eyiyo.
Izicelo ezili-10 ongasayi kuphinda uzifake kwi-Windows 8
IWindows 8.1 iza nezinto ezininzi ezakhiwe ngokwendabuko, kungekho mntu wesithathu ofunekayo kolu khululo lutsha.
Indlela yokwandisa umfanekiso ngelixa ugcina isisombululo sayo ngeAdobe Photoshop
I-Adobe Photoshop isinika ithuba lokwandisa umfanekiso okhulu kancinci, ukugcina umgangatho.
Bhrawuza iwebhu njengakwiselfowuni
Isongezo esinokufakwa kuGoogle Chrome kunokusinceda sibone amaphepha njengakwizixhobo eziphathwayo.
Uyibetha njani uGoogle kwimibuzo yethu
UGoogle unamaqhinga ambalwa okusebenzisa imiyalelo ethile, yonke enikezela iziphumo ezikhawulezileyo nezithembakeleyo.
Phinda ufumane iiFayile ezicinyiweyo nge-iCare Data Recovery
Ukubuyiswa kweDatha ye-iCare sisicelo esiza kusinceda sibuyele kwiifayile esizicime ngengozi.
I-LastPass, indlela ekhuselekileyo yokulawula ipaswedi yethu
I-LastPass sisixhobo esihambelana neenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza kunye nezikhangeli ze-Intanethi ezisetyenziselwa ukuphatha ipassword.
Indlela yokwehlisa isantya kwiWindows 8 Pro ukuya kwiWindows 7
I-DownGrade ukuya kwiWindows 7 inokwenziwa kuphela kwiWindows 8 Pro kwaye phantsi kweemeko ezithile eziphakanyiswe nguMicrosoft.
Iindlela ezili-10 zoKhuseleko eziSebenzayo zokuThathela ingqalelo iiWindows
Sincoma ukuba ulandele ezili-10 zeengcebiso ezibalulekileyo zokugcina iWindows isebenza ngokufanelekileyo.
I-Atmosphere Lite sisixhobo esinokuthi senze ngokwezifiso ukumamela izandi zendalo kwiWindows njengemvelaphi.
Ngamaqhinga amancinci sinokubangela ukuba kungasebenzi ukulayishwa okuzenzekelayo kweMifanekiso kwiGmail.
UMicrosoft wenze ukuphuculwa kwexesha lokubamba isikrini kwiWindows 8.1.
Uzifikelela njani izicelo zam zikaGoogle Chrome
Sikhankanya ezinye iindlela ezi-3 onokuzisebenzisa ukufikelela kwidesktop yeChannel kwaye uphonononge usetyenziso olufakelweyo.
Ungazilawula njani iifolda kwiGoogle Drayivu
Imisebenzi emitsha nenomdla yongezwe kwiGoogle Drayivu ukuze abasebenzisi bayo bakwazi ukulawula iifayile zabo ngokulula.
Faka i-Instagram kwikhompyuter yakho eneWindows okanye iMac
Icebo elincinci lokukwazi ukubhalisa kunye nokufaka i-Instagram kuzo zombini iiWindows kunye neMac.
Guqula ikhompyuter yakho ibe sisixhobo se-Android
Ngesicelo esincinci sinokuba nenkqubo esebenzayo ye-Android kwiWindows okanye kwi-Mac.
Uyenza njani ikholaji yomfanekiso ngokulula ngePicasa
I-Picasa sisixhobo esinokusinceda senze ikholaji yemifanekiso simahla kwaye ngamanyathelo ambalwa.
Umkhupheli weVuze Torrent unokusinceda ukhuphele iifayile zeTorrent kwi-Android usebenzisa iWi-Fi:
I-OnAir sisixhobo esiza kusinceda simamele umculo osasazwayo okwabelwanayo ukusuka kwikhompyuter yethu ukuya kwizixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni.
UTweedle ngumxhasi we-Twitter we-Android onokusinceda silawule ngaphezulu kweakhawunti kwindawo enye.
Ezinye iindlela zokuphulaphula umculo osasazayo
Ukusasazwa komculo yenye yeenkonzo ezikhoyo ngoku, esiza kuthi sikhankanye ezimbalwa kuzo.
Zisebenza njani izimvo zikaYouTube kuGoogle +?
Ukuba iividiyo zikaYouTube zinezimvo ezivaliweyo, unokuyenza kwiakhawunti yakho yeGoogle +.
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kwiWindows 8.1 ukuqhuba usetyenziso lwakho
Ngamaqhinga amancinci sinokwenza ngokulula iindlela ezimfutshane zokusebenzisa nayiphi na usetyenziso kwiWindows 8.1.
Iindlela ezi-5 ezilungileyo zokukhusela i-Android ngamagama okugqitha
Dibana nezicelo ezimbalwa ze-Android onokuzikhuphela kuGoogle Play ukukhusela isixhobo sakho se-Android ngamagama agqithisiweyo.
Ezona nkqubo zintle ze-Ex-Metro zeWindows 8.1
Siyakumema ukuba udibane nezicelo ezimbalwa ezigcinwa ngohlobo lwakudala lweMetro olucetywe nguMicrosoft yeWindows 8.1
Ungazikhuphela njani ngokulula iividiyo ze-Instagram
Iividiyo ezili-15 zesibini ze-Instagram zinokukhutshelwa ngokulula ngokusetyenziswa kwangaphandle okanye kwiwebhu.
Umhlobo ongabonakaliyo okanye uMhlobo Ofihlakeleyo ngomnye wemidlalo eyonwabisa kakhulu kule mihla. Sikubonisa ezinye iindlela ezi-6 zokumema abahlobo bakho.
Ngoku singasebenzisa eyethu imifanekiso ebanjwe kuGoogle + ukuze babe yinxalenye yeGoogle Street View eyenzelwe wena.
I-Quip sisicelo se-Android esinokusetyenziswa njengomhleli wokubhaliweyo odibeneyo.
ISmallPDF kunye nemisebenzi yayo emine yokusebenza kwi-Intanethi ngePDF
ISmallPDF inokusinceda sisebenze ngeefayile zePDF sisebenzisa kuphela isikhangeli sethu seintanethi.
Ezona ndawo zintathu zewebhu zokukhuphela amaphephadonga
Kukho izigidi zamaphephadonga esinokuzikhuphela kwi-Intanethi. Sikunika iiwebhusayithi ezi-8 ezilungileyo zokukhuphela imali.
Guqula iifayile zakho zeRAR zibe yimifanekiso ye-ISO ngokulula nge-AnyToIso
I-AnyToIso sisixhobo esincinci esiza kusinceda ukuguqula iifayile, iifolda, izikhombisi, iidiski zeDVD nokunye okuninzi kumfanekiso we-ISO.
Ungabhloka njani izixhobo ze-Apple zokuhambisa abantwana
Iindlela ezimbini ezilula kakhulu zokutshixa iiApple Devices ukuze uzinikele ngokuzithemba ebantwaneni.
Rekhoda kwaye uhlele ezona zinto zibalulekileyo kwikhalenda ye-Outlook.com
Ikhalenda ye-Outlook sisixhobo esihle kakhulu esiya kusinceda sikhumbule imicimbi ebalulekileyo kwaye senze ezinye ezimbalwa ngokomdla wethu.
I-Boot okanye ayiyi-Boot?
Umenzi we-ISO yoMlingo onokusinceda (phakathi kwezinye izinto) ukufumanisa ukuba umfanekiso we-ISO uyabhoboka na okanye hayi.
I-Picasa kunye ne-exiftool ziindlela ezi-2 ezigqwesileyo esinokuzisebenzisa ukutshintsha umhla weefoto zethu.
I-MobaLiveCD inokusinceda siqinisekise ukuba umfanekiso we-ISO une-bootable boot okanye awunayo.
Lawula onke amagama ethu okugqithisa nge-F-Secure KEY Password Manager
I-F-Secure Umphathi wegama eligqithisiweyo sisicelo esincinci esinokusinceda ukulawula zonke iinkcukacha zokufikelela kwindawo enye.
Yintoni iVHD ebonakalayo kwidiski?
Sisebenzisa iWindows 7 yokuBuyisa iDiski, sinokuphinda sibuyise i-OS ebanjwe kumfanekiso wediski yeVHD.
Lawula iinkonzo ezininzi zamafu ngeMultcloud
IMultcloud yinkonzo yasimahla enokusinceda ukuba siphathe indawo yokugcina eyahlukeneyo kwilifu kwindawo enye.
I-XBox Phila kwiwebhu? Ke masibe yinxalenye yayo ngeWindows 8
Ukuba unayo iakhawunti yeMicrosoft ebhalisiweyo (njengeHotmail.com) emva koko ubunokuyonwabela i-XBox Live kwiwebhu.
"Ndithathe isigqibo sokuvala iakhawunti yam ka Hotmail ngokusisigxina"
Funda indlela echanekileyo yokuvala ngokusisigxina i-akhawunti ye-Hotmail ngokukhetha naziphi na iindlela ezi-2 ezikhoyo zalo msebenzi.
Ukuqokelelwa kwabahleli beetekisi ezincinci zewebhu
idlala umgcini komnye wabahleli beetekisi ezincinci kunabo bonke kwiwebhu, ibonelela ngemisebenzi esisiseko nebalulekileyo.
IVolafile.io yabelana ngeefayile ngokungaziwayo nabanye abasebenzisi
IVolafile.lo yinkonzo yelifu eya kusivumela ukuba sabelane ngeefayile kumagumbi angaziwayo okanye amaqela.
IPenflip sisicatshulwa esincinci esisebenza efini kwaye sinokumema abasebenzisi abaninzi ukuba basebenze kwiprojekthi ethile.
Ivenkile yeWindows yeWindows sisicelo esivela njengethayile kwi-Windows 8 Start Screen, enokubuyiselwa okwethutyana.
I-myMail sisixhobo esincinci esisebenza njengomthengi kwii-imeyile zethu, kodwa iyahambelana nezixhobo zombini ze-Android kunye ne-iOS.
IMediaFire Desktop, indlela elula yokusebenzisa i-10 GB kwilifu
IMediaFire Desktop ngumxhasi wenkonzo yokubamba kwilifu esinokuthi siyisebenzise kwiWindows enendawo yasimahla ye-10 GB.
Abadlali bomculo ababalaseleyo be-Android
Uluhlu lwabadlali ababalaseleyo bomculo zezi: PowerAMP, doubleTwist, N7 Player, Neutron Music Player kunye neVLC. Ukukhetha ezintlanu ngokugqibeleleyo kubathandi bomculo
Ungazikhubaza njani izicelo eziqala ngeWindows
I-MSConfig ngumyalelo weWindows onokusetyenziselwa ukukhubaza ezinye izicelo ukuqala nge-OS kunye nokuphucula ukusebenza kwazo.
Ukudityaniswa kwezona zixhobo zisisi-10 zibalaseleyo ze-Android
Siza kukhankanya ezona zisisi zibalaseleyo ze-10 ze-Android, kunye nokukhankanywa okuncinci malunga neyona nto ibaluleke kakhulu kubo.
Ukufunda ukulawula iifayile zethu ngegalari yokuPhila yeWindows
Igalari yeeFoto zikaWindows Live sisixhobo esincinci esiza kusinceda sabelane ngemifanekiso kunye neevidiyo kunxibelelwano lwasentlalweni nakwezinye iinkonzo.
Ukwenza imisebenzi ebaluleke kakhulu kuYouTube
I-YouTube ineTranscript njengenye yezona zinto zinomdla eziza kuthi zisinike ithuba lokuqonda ividiyo ngcono xa idlala.
Fumana isiguquli semali esihlukeneyo yezixhobo ezahlukeneyo
Unomdla wokuguqula imali onokuyisebenzisa kwifowuni okanye kwikhompyuter ngokusebenzisa usetyenziso lwewebhu.
Indlela elula yokwenza idiski ebonakalayo kwiWindows
I-Dataram RAMDisk sisixhobo esincinci esiza kusinceda senze idiski ebonakalayo ngokusetyenziswa kwenkqubo ye-RAM.
Ukunkqonkqoza sisixhobo esincinci esinceda ukuvula iMac ngokuthepha kabini kwiscreen se-iPhone.
Ngamaqhinga ambalwa, siya kuba nakho ukufumanisa ukuba ii-imeyile zethu zinika ulwazi lwabucala ngexesha lokuthunyelwa.
Omnye wemibuzo ekhethekileyo kwi-Intanethi yile: Iakhawunti ye-imeyile; Ngamaqhinga amancinci sinokwazi ukuba umntu ukwenzile.
Ngokusebenzisa i-Google macro, sinokuhlaziya iinkcukacha zonxibelelwano esizifunayo ngokuzenzekelayo.
Yenza intetho-to-umbhalo okhutshelweyo ngetaytyper
I-talktyper sisicelo sewebhu esenza ukuba imakrofoni yekhompyuter yethu isebenze ukuze siqale ukuyalela kunye nokuguqula yonke into ibe ngumbhalo.
Inkonzo yokubamba iMEGA, kutheni uyisebenzisa phakathi kwabanye?
I-MEGA ikunika ithuba lokuba ne-50 GB yendawo efini simahla kwilifu leefowuni eziphathwayo kunye neekhompyuter zakho.
Ukujonga eyona ndlela ifanelekileyo yokukhipha iiapps kwi-Android
Nazi iindlela ezimbini ekulula ukuzilandela zokukhipha usetyenziso kwifowuni yakho ye-Android.
Ungayikhubaza njani iWindows Live Mail kwiFirefox
IWindows Live Mail yinkonzo emiselweyo ekhoyo kwiMozilla Firefox xa uthumela umfanekiso kwisikhangeli nge-imeyile.
Kutheni le nto kufuneka sibethele ulwazi kwi-pendrive ye-USB
IBitLocker sisicelo esidityaniswe kwiWindows 7 kunye neWindows 8 eya kuthi isivumele ukuba sibambe ukufikelela kwintonga ye-USB ngegama eligqithisiweyo.
Khusela ngokukhuselekileyo kwaye ususe ipassword kwiFirefox
Ngamaqhinga amancinci onokufumana ngokukhetha ukucima okanye onke amagama agqithisiweyo akwiFirefox.
Izikrini zesikrini kunye ne-ShareX kwilifu nakwikhompyuter
I-ShareX sisicelo esincinci esivulekileyo esivumela ukuba sithathe izikrini ngeendlela ngeendlela ezahlukeneyo.
Indlela elula yokwenza i-RSS feed ye-Twitter
Ukubakho kokudala ukondla nge-RSS kupapasho lwethu lwe-Twitter kwenziwa ukuba kubongwe ngeskripthi esibonelelwe nguGoogle.
Uguqula njani ezinye izinto ezipholileyo kwi-OS X dock? (II)
Kule fowuni yesibini, sihlalutya ezinye iinkalo esinokuziguqula kwi-Mac yethu kwi-Mac kunye nenkqubo yokusebenza: OS X Mavericks
Ukuphonononga: Uyikhuphela njani imifanekiso ngokuKhuphela uMfanekiso ngokulula
Umkhupheli wemifanekiso yiplagi encinci kaGoogle Chrome eya kuthi isincede sikhuphele imifanekiso yemifanekiso ebanjwe kwiwebhusayithi.
I-OSX Mavericks ayikuvumeli ukuba ufake usetyenziso oluthile kwi-Mac yakho, funda indlela yokwenza
Sikufundisa ukulawula iinketho zokhuselo ii-OSX Mavericks ezinazo ukuze ufake iinkqubo zomntu wesithathu ngaphandle kweVenkile yeApple yeMac.
Ukuphonononga: Ukukhohlisa ukulandelela imiyalezo ethunyelweyo kwaye wazi ukuba iyafundwa
Iinkonzo ezimbini ezinomdla kwiwebhu zisinceda sazi ukuba ii-imeyile zethu zifundwe na okanye hayi ngokulandela umkhondo womsebenzi wabo.
Yazi kwaye ulungiselele ngokufanelekileyo uLawulo lweMishini kwi-OSX Mavericks
Sikuxelela ukuba loluphi ulawulo lweMishini olukuMac kunye nendlela yokuluhlela ngokufanelekileyo
Hlela iifayile ze-Excel, iZwi kunye nePowerpoint nge-HOPTO app ye-iPad
I-Hopto, isicelo esitsha sokuhlela iifayile zeOfisi kwi-iPad
Uphononongo: Enye indlela yogcino lweWindows
Ukubuyisela ngokupheleleyo inkqubo yethu yonke kunye nezicelo esizifakileyo kwiWindows, sicebisa ukuba incwadi silandele ngokulula.
Indlela yokukhawulezisa ukusebenza kwekhompyuter
Ukukhawulezisa ukusebenza kwekhompyuter yethu kufuneka silandele la manyathelo alandelayo. Ikhompyuter iya kuphinda isebenze kwakhona njengosuku lokuqala.
Faka i-AppLock kwi-Android yakho kwaye unike ukhuseleko kwizicelo zakho
Sichaza amanyathelo ekufuneka uwalandele ukubeka ikhowudi yokhuseleko kwizicelo ozifunayo nge-AppLock
Inguqulelo ye-Android 4.4 ekhutshelwe i-Nexus 7
Inguqulelo ye-Android 4.4 ikhutshelwa i-Nexus 7 ka-2013
Ukujonga kwakhona: Ungawaphula njani amagama agqithisiweyo kwiFirefox nakwiGoogle Chrome
Ukuphononongwa ngendlela yokufumana amagama agqithisiweyo agcinwe kwiFirefox nakwiChannel inyathelo ngenyathelo ngaphandle kwezicelo zomntu wesithathu
Iakhawunti yeWindows 8 enolawulo oluncinci kumanyathelo ambalwa
Sikufundisa ngale khokelo ukwenza iakhawunti kwiWindows 8 enolawulo oluncinci
Amaqhinga ambalwa kwabo baqale nge-Instagram, konke ngokusemthethweni ukuthintela izohlwayo.
Kweli nqaku ndifuna ukukubonisa ukuba yeyiphi imidlalo yam emi-5 endiyithandayo ye-iOS usebenzisa iVenkile ye App ukuze uyikhuphele kamva.
Ziya kusebenza njani iividiyo ezingaxelwanga kwi-YouTube?
I-YouTube iqinisekisile nje ukuba umsebenzi wokubukela iividiyo kwizixhobo eziphathwayo ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi uza kuphehlelelwa ngo-Novemba.
UTim Cook ukhuthaza abasebenzi bakhe nge-imeyile
Bonke abasebenzi baka-Apple bafumana nje i-imeyile evela kuTim Cook ebakhuthaza ukuba baqhubeke nomsebenzi kunye nokonyuka kweeholide
Gcina kwaye wabelane ngeengoma zazo zonke iingoma zakho nge musiXmatch
Ukuba ikaraoke yinto yakho okanye ufuna nje ukwazi ukuba zeziphi iingoma ozithandayo, ukucula umculo kuya kukunceda ufumane amazwi eengoma zakho.
Abadlali abahlanu ababalaseleyo bomculo kwidesktop yakho
Sikulethela abadlali abahlanu bomculo bePC okanye iMac, ekunzima ukukhetha ukuba yeyiphi eyona ilungileyo, kodwa ezintlanu zibaluleke kakhulu kubathandi bomculo.
Ezona mpawu zibalaseleyo ze-iOS 7 ngokweenkcukacha (II)
Kule posi sihlalutya izinto ezi-4 ezahlukeneyo: iSiri, iiFoto, iSafari kunye neAirDrop.
Loluphi uhlobo losetyenziso olunikezelwayo ngobuchule kunye ne-Evernote app enkulu?
Ukusuka kwiincwadi zokupheka, iimemo, izicwangciso zohambo, uluhlu lwempahla, iibhanki zemifanekiso zezinye zezinto esiza kukufundisa zona nge-Evernote.
Isifundo: Ngqamanisa neTunes ngaphandle kokulahleka kwedatha
Sikubonisa inyathelo ngenyathelo ukuba ungqamanisa njani iDevice yakho okokuqala nge iTunes kwiPC yakho okanye kwi-Mac ukuze ungalahli idatha
Izicelo ezintlanu ezibalulekileyo zokuqhuba kwi-Android
Izicelo ezisebenzayo ezinazo i-Android liqabane elifanelekileyo lokurekhoda iindlela, amanani kunye nokwabelana ngayo yonke into kuFacebook nakuTwitter.
Ukucoca imbali yakho kaGoogle kulula kakhulu. Nantsi inyathelo ngenyathelo ngenyathelo ukuze ucime imbali yakho kaGoogle. Cacisa uphando oluthile ngaphandle kweengxaki
Isikhokelo se-ASO: Ukubeka iiapps kwivenkile yeapp
I-ASO (iVenkile yeVenkile yeApple) ibaluleke kakhulu kuba ngaphandle kwayo ngekhe sibeke isicelo sethu ngokuchanekileyo kwivenkile yesicelo.
Ukuhlaziya ngokuzenzekelayo kunye nokuhlaziya iphepha ngokuzenzekelayo
I-Auto Refresh Plus ivumela abasebenzisi beChannel ukuba bahlaziye iphepha elinye okanye lahlukileyo lewebhu ngokuzenzekelayo ngokwamaxesha.
Ezona nkqubo zilungileyo zokuthumela imiyalezo, ezinye iindlela zeMessage, zabasebenzisi be-iOS
I-Backberry Messenger (BBM) sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni abantu besanamathela kwizixhobo ...
SIKELELA -Umhleli wevidiyo ye-iOS yasimahla enamandla kakhulu enekhalenda yeeMulti
I-CUT emnandi sisicelo sendalo yonke (sinikezelwe kwi-iPhone kunye ne-iPad) kwaye sipakishwe ngezixhobo ezinomdla ezivela ...
I-RockPlayer2 iza ujongano oluhle lomsebenzisi kunye nenketho yokwabelana ngemultimedia yeWiFi kunye nokubukela iividiyo ezibukhoma kwi-intanethi
Sekulithuba noko ukusukela oko iRockPlayer2 yenziwa yafumaneka kubasebenzisi be-iOS, kwaye ngoku lixesha lokuba…
Iindlela ezimfutshane zeFirefox yokukhangela ngokukhawuleza
I-Chrome kunye neFirefox - ezimbini zezona bhrawuza zaziwayo- zineendlela ezimfutshane kakhulu, kodwa ewe ...
Cula! Cula! Kwi-iPhone: konwabela ukucula ikaraoke naye nabani na kwihlabathi liphela
Cula! sisicelo esikuvumela ukuba wenze iingoma zekaraoke zeengoma ozithandayo, kodwa ayipheli apho. Nazi…
Zeziphi iindawo ezenza ikhibhodi?
Ikhibhodi sisixhobo esinegalelo esisebenzisa ulungelelwaniso lwezitshixo, ukuze zisebenze njenge ...
Ukwabelana ngamaRoma - I-Classic console ye-emulators
Ukwabelana ngeRom sisicelo sasimahla esisinika ii-emulators ezi-6 ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi zeekhonsoli zeklasi kunye nemidlalo yazo nganye nganye.
Yintoni ip yam? Uyazi njani i-IP onxibelelana ngayo ne-Intanethi
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayibona njani i-IP yakho kunye nokuba yeyantoni, qhubeka ufunda esi sifundo sincinci malunga nedilesi yakho ye-IP. Fumana ukuba yeyiphi i-IP engaphantsi komzuzu.
Landela ii-Olimpiki zaseLondon zika-2012 kunye nee-Olimpiki ze-NBC kunye nee-Olimpiki ze-NBC ezibukhoma ezongezelelweyo [i-Android, i-iOS]
Ukuba ne-Android okanye i-iPhone kunokuhamba indlela ende ekuhluthiseni indlala yakho kulwazi lwezemidlalo. Kwi…
Kutheni le nto iAirdroid ingadibanisi?
I-Airdroid sisicelo esiya kusivumela ukuba sidibanise nayiphi na igajethi esinayo yenkqubo yokusebenza ye-Android kunye nekhompyuter yethu ukude
IE Tab iyasivumela ukuba silingise ngokugqibeleleyo i-Intanethi yokuNikezela ngeNjini ngaphakathi konxibelelwano lweGoogle Chrome.
Enye yezona ndlela zixhaphakileyo zokuthumela iifayile okanye isicatshulwa ngaphezulu kwe-imeyile okanye abathunywa ...
I-jetAudio izisa umculo onamandla kwaye onomdla wokudlala kwakhona kwi-Android
Xa uthetha ngezinye zezona zinto zityebileyo kwaye zisetyenziswa kakhulu, abadlali beaudiyo yedesktop, iJetAudio,
Ukuhanjiswa kwakhona kweTab entsha, khetha iphepha lethebhu entsha
Isifundo esilula ukuseta iphepha elingagqibekanga likaGoogle xa uvula ithebhu entsha kwiGoogle Chrome.
Uyenza njani indlela emfutshane kunye newebhusayithi yakho oyithandayo
Imfundo elula enemifanekiso ngendlela yokwenza indlela emfutshane njengesicelo kunye newebhusayithi yakho oyithandayo.
Thatha izikrini-skrini ngokujonga kuqala iMac kunye namanye amaqhinga [Ingcebiso]
Phezulu kwayo, umbonisi womfanekiso osisiseko we-Mac ujongeka ngathi uphakathi. Ngokuqinisekileyo, ikuvumela ukuba ubone ...
Ukubanjwa kwevidiyo ukwenza oopopayi basimahla bokuzoba kwi-iPhone / kwi-iPad
Ivenkile yeTunes App igcwele iifoto kunye nevidiyo zokusebenza, kwaye rhoqo emva koko, sibona i…
IMasatu ye-Android kunye ne-iOS: yenza iicapsule zeefoto ngexesha kwindawo enye kwaye ujonge kwinyani eyongeziweyo
Entsha kwivenkile yeGoogle Play kunye neVenkile yeApple yeApple, iMasatu yinethiwekhi entsha kunye nokuzaliswa konwaba ...
I-Alarm Clock Ultra, esona sicelo sigqibeleleyo nesigqibeleleyo se-alamu ye-Android
Esona sicelo silungileyo sokukuvusa kusasa.
IllegalAlienReport.com: Indawo yokufumana kunye nokwenza ingxelo ngokungekho mthethweni eUnited States
Indawo entsha ithathe ingqalelo yethu. Le IllegalAlienReport.com, iwebhusayithi eyenzelwe ukukhangela kunye nokunika ingxelo ngokungekho semthethweni ...
Namhlanje, iinethiwekhi ze-P2P ze-Android zizalwa ngokutsha njengeendlela ezigqwesileyo zokuhambisa iifayile kwimigama emide.
IFayileFort Backup yinto elula, kodwa enamandla yokugcina idatha eluncedo eyenza ngokuzenzekelayo i-backups ...
IZiko leSisombululo seWindows Live: Lungisa iingxaki ngeMicrosoft
Kulabo bafuna inkonzo yezobugcisa ukusombulula iingxaki zabo ezinxulumene neemveliso zeMicrosoft, ngakumbi ...
Iorad-Yenza iincwadana ezinxibelelanayo ngokulula
Iorad sisicelo sewebhu esivumela ukuba senze iincwadana ezinonxibelelwano ngokukhawuleza nangokulula
Zithini iibhokisi zencoko yababini kwaye zezantoni?
Iyaziwa njengebhokisi yencoko yababini kuzo zonke ezi pop-up windows ezibonakala embindini wokusetyenziswa kwethu ...
Ukudibanisa njani esweni kwi-CPU?
Isicwangcisi sekhompyuter okanye isikrini sisixhobo sokubonisa esihlala si-TFT-LCD esikrinini esincinci, ...
I-PDF Sb -Injini yokukhangela ekwi-Intanethi yeencwadi kwifomathi yePDF
I-pdf sb sisicelo sewebhu sasimahla esisinika i-injini enamandla yokukhangela ifayile ye-pdf eneencwadi ezingaphezulu kwesigidi esi-7 kwi-Database yayo.
Yintoni iifayile ze-SWF?
Iifayile eziphelisa i-SWF zezo fayile zefomathi yemultimedia, yemizobo yevektha, kunye nekhowudi ye-ActionScript, ethi…
Yenza utyikityo loPhilayo
Kwimeko apho ufuna ukwenza umsebenzi wokuhlela ohambelana nekhompyuter kwiifoto zakho okanye kumxholo wewebhu, musa ...
Zithini iifayile zexeshana kwaye zezantoni?
Omnye wemisebenzi enomdla kakhulu kwiinkqubo zokusebenza kukudala iifayile zethutyana ezidumileyo, i ...
Iinkqubo zokwenza ii-triptychs
I-triptych njengoko usazi kakuhle luhlobo lwencwadana yolwazi esongelwe kwiindawo ezintathu, apho ...
Ii-imeyile zaqala ukukhutshwa ngo-1965 kwaye zivela indlela ende okoko ...
I-Wordmark-Jonga isicatshulwa esineefonti ezahlukeneyo ngaxeshanye
I-wordmark sisicelo esisemagqabini esivumela ukuba sijonge isicatshulwa esineefonti ezahlukeneyo ngaxeshanye ukuze sithathe isigqibo ngeyona font
Yila ilokhwe yakho yomtshato kwi-Intanethi enxibe uMtshato
ilokhwe yomtshato sisicelo esikuvumela ukuba uyile ilokhwe yakho yomtshato kwi-intanethi ngendlela elula nekhawulezayo
Khuphela iinguqulelo ezahlukeneyo zeGoogle Chrome
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uGoogle Chrome ufumene ingxelo entsha ezinzileyo, inombolo 9, eyona nto ibalulekileyo ukuba ...
Guqula iifoto zakho zibe ziZombies ngeZombifier
i-zombifier sisicelo esivumela ukuba siguqule ubuso bethu ngaphakathi kwiifoto zibe ziZombies zenza i-photomontage enefuthe elihle kakhulu
Guqula nakuphi na ukurekhodwa kwesandi kwisicatshulwa ngeLizwiBase
I-Voicebase sisicelo esivumela ukuba siguqule iifayile zomsindo ukuba zibhalwe ngokulula kwaye simahla, kwaye ikwasivumela ukuba senze iinguqulelo.
Imbali emfutshane yeenkqubo zokusebenza kweMac OS
Ngeli xesha siza kuzinikela ekuthetheni ngembali yeenkqubo zokusebenza kweMac OS. Inguqulelo yokuqala ...
Ungazilungisa njani izitshixo zePC ezingasebenzi
Amaxesha amaninzi sichwetheza kwenye indawo kwikhompyuter okanye sithetha kwi-MSN, kwaye siyaqonda ukuba kukho ...
Ungayitsho njani "Ndiyakuthanda" ngolingano lwezibalo
Ngokuqinisekileyo, uluvo olukwibhokisi enesihloko esithi Nerd Love Solve for "i" yeyona inomdla kuthi "Ndiyakuthanda" ...
Yenza iFirefox ngokwezifiso neRotator Personas
Iskripthi sokwenza ngokwezifiso isikhangeli ngokutshintsha iitemplate ezisebenza njengezikhumba esele zimiselwe, zijikeleza rhoqo phakathi ...
Ndilufumana phi uxwebhu lwamaxwebhu akutshanje
Ukujonga iwebhu, yonke imihla sidibana nemifanekiso kunye nazo zonke iintlobo zolwazi esizifumana zinomtsalane, zihlekisa ...
Jonga i-hotmail yam
IHotmail ngokungathandabuzekiyo yenye yeenkonzo ze-imeyile ezisetyenziswa kakhulu, kwaye oku kungenxa yokugqwesa ...
Enye yeendlela zokusebenza ezisetyenziswa kakhulu namhlanje yi-Android, eyathengwa nguGoogle ngo-2007 kwaye inezinto ezinomdla.
I-Firebug sesinye sezizathu zokuba kutheni abanye abaphuhlisi bewebhu bengatshintshelanga kwiFirefox yeChannel. I…
Isininzi sedrayivu enzima
Njengoko sele sazi, kumaxesha akutshanje, itekhnoloji ihambile ngokutsiba kunye nemida kwindawo yolonwabo lwasekhaya kunye ...
Ulwandiso lokukhuphela iividiyo zeYouTube kwiGoogle Chrome
Phakathi kolwandiso lweenkonzo zikaGoogle zeChannel ebesizibhengeza, eyona ibaluleke kakhulu ...
Phinda wenze isithuba esinqumlayo
Ukuphinda-phinda i-tab, sihlala sicofa ekunene kule thebhu kwaye siye kuphinda ukhetho. Kodwa ukuba u ...
Iindlela ezimfutshane zekhibhodi kaGoogle Chrome
Xa uqala ukusebenzisa iindlela ezimfutshane zekhibhodi kwinkqubo nganye, uyaliqonda ixesha elinokufikelelwa ...
Faka iGoogle Chrome ngaphandle kweintanethi
Ikhonkco lokufaka isikhangeli linikezelwa kwiphepha elisemthethweni leGoogle Chrome. Eyona ndlela inokwenzeka ...
I-Intanethi itshintshe indlela yokunxibelelana kwihlabathi liphela, lonke ulwazi ekunokwenzeka ukuba kwakunzima ngaphambili ...
I-Intanethi kwinkulungwane yama-XNUMX
I-Intanethi, njengoko sisazi kakuhle, yindlela yokusebenza yabantu abaninzi, kuba iyasivumela ukuba siqhubeke nomsebenzi ...
Iinkqubo ezilungileyo zokwenza igrafiti
Ukuba ungumntu othanda uyilo loyilo kwaye uyathanda ukuba emva kweendonga wonwabele okuhle kwaye kumnandi ...
Yazi iGoogle Chrome interface (II)
NgeChannel unokuba negalelo ngokuthe ngqo kwidesktop, onokuthi uqalise ngayo usetyenziso lwewebhu ngokuthe ngqo kwi ...
Iimpawu kunye nezibonelelo zeGoogle Chrome
Inkampani yewebhu yamazwe aphesheya neyaziwayo, uGoogle usungule ngo-2008 njengoko usazi kakuhle, isikhangeli sayo se-Intanethi, esintsonkothileyo, ...
Iimpawu zeNorton Antivirus
Ngaba ujonge i-antivirus elungileyo ekhusela ikhompyuter yakho iiyure ezingama-24 ngosuku? Ngelixa kuyinyani ukuba umnikelo ...
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ze-imeyile
Siyazi kakuhle ukuba i-imeyile yenye yezona zinto ziluqilima zamaxesha akutshanje kwaye ...
Siyaqhubeka nokufunda ngakumbi malunga necala elimnyama lekhompyuter. Sithetha abaqhekezi. Olunye uhlobo ...
Iindidi zooMlilo: Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Sele siyazi malunga nenethiwekhi yomlilo okanye iiplagi zokucoca, lixesha lokuba wazi enye ye ...
Uyisusa njani ithebhu entsha yeebhukhimakhi kwiGoogle Bar
Ibha entsha kaGoogle ibandakanya ngokungagqibekanga umsebenzi omtsha onokuthi ungathandwa ngumntu wonke ...
Ngamanye amaxesha xa usiya kuYouTube kwaye ufuna ukukhangela ividiyo, iziphumo ezininzi ziyavela ukuze zibe nomdla ...
Faka ingxelo yokugqibela yeAdobe Flash Player kuGoogle Chrome
Abasebenzisi bakaGoogle Chrome baye baqaphela ukuba ngamanye amaxesha asinakudlala ividiyo ye-YouTube kwaye nini ...
Yintoni ibhlog? Ngaba ibhlog iyafana neforum okanye i-portal? Apha uya kufumana umahluko phakathi kwebhlog kunye nento engeyiyo ibhlog, echazwe ngendlela yokonwabisa kunye nemizekelo.
Yenza iakhawunti yeGmail
Isifundo kunye nesikhokelo sokwenza iakhawunti kwiGmail, i-imeyile yasimahla kaGoogle eya kukunika ukufikelela kwezinye iinkonzo ezinje ngeYouTube, uGoogle Play nangaphezulu.
Yintoni abaqhubi okanye abalawuli
Yintoni abaqhubi, ziintoni abaqhubi? Apha uyakufumana into oyifunayo malunga nabaqhubi (okanye abalawuli) echazwe ngokulula nangemifanekiso.
Inqaku lesithathu kwi-trilogy malunga nobungozi be-Intanethi Kule meko, malunga neCyberterrorists kunye neendlela abazisebenzisayo.
Incwadana yeAres ngeSpanish. Kule ncwadana yenguqulo ye-2.0.9 yee-Ares eziqhelekileyo siza kubona indlela yokufaka kunye nokuqwalasela inkqubo yokukhuphela ngokulula kunye nayo yonke iSpanish kunye nemifanekiso emininzi.
Iingcebiso zamagqabantshintshi ukunceda ukuma hayi ngokuchaseneyo. Izinto ekufuneka uzenzile kwaye ezo ungafanelekanga ukuzenza. Umsila omde, ii-troll, ukukhangela amatyathanga, njl.
Amagqabantshintshi ayimfuneko ekuhlaleni ibhlog, kodwa xa ubeka iposti kufuneka ubabandakanye kwisicwangciso sokumisa ukuba ufuna ukuba wonke umsebenzi kwiphepha lakho usebenze ebusweni beenjini zokukhangela.
I-AdSense paradox iphikisana nokusebenza. Ukuba ufuna ukwenza imali nge-Adsense kufuneka uqale ufumane izithuthi ezifanelekileyo kwibhlog yakho. Ukuba uzilungisile iintengiso zakho xa undwendwela ezimbalwa, uya kuphulukana namathuba okukhula.
I-PPS. Iifayile kunye .pps / .ppsx ulwandiso yimiboniso eyenziwe ngeMicrosoft PowerPoint. Ezi ntlobo zeefayile zikwabizwa ngokuba zii-pps / ppsx
Ukuba ufuna ukwazi ukufaka i-watermark kwimifanekiso yakho, kuya kufuneka ufunde eli nyathelo ngenyathelo lesifundo elichaza indlela yokongeza i-watermark okanye i-WaterMark kuyo yonke imifanekiso oyisebenzisayo kwibhlog yakho.
Kodwa jonga indlela ii-elves ezidanisa ngayo emlanjeni ... ukuba ufuna ukubona abahlobo bakho besiba zezona zihlekisayo kufuneka uzame i-Elf
Uvavanyo Ndizame iblogger!
Enye ibhlog edlula NGAPHANDLE kwe-euro ngamaphepha eVinagre Asesino. Ngaba uza kuphuma ephila okanye eza kufa?
Intsholongwane iyonke ikuvumela ukuba uhlalutye nayiphi na ifayile eneenkqubo ezingama-32 ezahlukeneyo zokulwa intsholongwane, ngeSpanish kwaye simahla.
Inqaku lokuqala elipapashwe kwiTribuna Libre yiVictormx, evela ku-ElNecio.com. Ngaba uyavumelana nezigqibo zabo okanye awuzabelani nabo?
Ukutshintsha iphasiwedi ye-Hotmail kulula kakhulu, kodwa abanye abasebenzisi bafumana iingxaki ngexesha lokutshintsha kwephasiwedi. Funda esi sifundo ukuze ukwazi ukuba ungalwenza njani inyathelo ngenyathelo ngenyathelo.
Uyicacisa njani imithombo oyisebenzisayo kumanqaku akho kwaye ulumkele iiPCP
Ukuba awuqinisekanga ukuba uqhagamshela ngokuchanekileyo kwimithombo yolwazi lwakho, kuya kufuneka ulifunde eli nqaku
Zonke izinto ezibengezelayo ayizizo i-meme :) Nazi izinto ezintlanu ekufuneka uyazi malunga neememes ukuze ufumane okuninzi kwesi sixhobo sentlalo sokwazisa phakathi kweeblogi.
Ukuzikhusela kwiHard drive. Ukuba uhlala usiva ukuba kuya kufuneka uhlaziye i-hard drive yakho kodwa ubungazi ukuba kutheni kufuneka uyenze, kuya kufuneka ulifunde eli nqaku malunga nokuchithwa kwaye uya kuqiniseka.
Ukuba ufuna ukutshintsha ikhadi lemizobo kwaye awazi ukuba yeyiphi oyifakileyo, okanye yeyiphi onokuyifaka, kuya kufuneka ufunde le ncwadana.
Ukuba uthathe inxaxheba kukhuphiswano lweGedket, kuya kufuneka ususe amakhonkco akhombe kwibhlog, kuba uGedket uthathe isigqibo sokuhlekisa kuthi sonke abathatha inxaxheba.
Sebenzisa iiMessenger ezimbini ngaxeshanye. Ukugcina abathunywa ababini abaneeakhawunti ezahlukeneyo ze-imeyile zivulwe ngaxeshanye kulula kakhulu ngale ncwadana inyathelo ngenyathelo ngenyathelo.
Ukuba ufuna ukwazi idilesi ye-IP yomthumeli othumele i-imeyile yeWindows Live Hotmail, kwesi sifundo sincinci uza kubona ukuba kulula kangakanani ukwenza njalo.
Ngaba akukho magorha kwindawo yebhlog? Meme: Amagorha ngaphakathi kubloga
I-86400, i-Emezeta kunye neGreenshines zezinye zezo zindincedileyo ndingazi ukuba zenze iViniga yokubulala.
Ukuba awuyazi indlela yokutshintsha utyikityo lwakho lwe-Outlook entsha (Hotmail) okanye ukubeka imifanekiso kwisiginitsha yakho, kuya kufuneka uyifunde le ncwadana.
Ndivula njani uMphathi weSebenzi? KwiWindows XP ukuvula uMphathi weSebenzi kufuneka ucinezele ukudibanisa amaqhosha amathathu ngaxeshanye.
Ukuba awukwazi ukuba nephepha lakho kwi-MySpace, landela le khokelo kwaye uza kubona ukuba ungayenza njani inyathelo ngenyathelo.
Spam yinkunkuma abasithumela yona kwii-imeyile zethu. Ungazivumeli ukuba ugalelwe inkunkuma kwaye ufunde ukuyiphepha.